सत्य लेखनको साहस ! | शहरबाट शब्दहरु
← भूतसंग जम्काभेटको सम्झना !
शहरबाट शब्दहरू शुरू ! →
जिन्दगीको किताबको हरेक पन्नाका हरेक शब्दहरु स्वतन्त्र हुन खोजिरहेका छन् । म माध्यम बनेर यसलाई पोख्न चाहन्छु । छर्न चाहन्छु । अर्थात खुल्ला किताब हुने तयारी गर्दैछु । सबैकुरा सबैसँग ‘प्रत्यक्ष’ राख्न गइरहेको छु । मन खोलेर कलमको निडर गति स्वतन्त्रपूर्वक हरदिन ढुक्कले मेरालागि । लेखनसँगै कम्युटरराईजबाट मुसा खेलाउँदै आधुनिक प्रकि्रयासँगै मेरा पारिवारिक, मित्रबन्धुका कुरा, पेशागत यात्रालगायत विविध पक्षहरु स्वतन्त्र खोल्नेछु ।
एउटा प्रयास अर्थात साँच्चै एउटा कठिन थालनी । सत्य लुकाएर देखाउने असत्यहरु कुल्चेर दिनका दैनिकी सार्वजनिक गर्न अभियानपनि हो यो । हरेक व्यक्ति आफैमा एउटा ग्रन्थ हो । बश यसैमा अडित हुँदै यो स्वतन्त्र अभियान प्रारम्भ गर्दैछु । एउटा फरक मत के पनि हुनसक्छ भने मेरा दैनिकीसँग अरुको के सरोकार ? तर सत्य के हो भने मेरो प्रयास र अभियान हो यो । यसमा कसैले मनपराउनु वा पढ्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक परिवेश उत्थान भएको छैन ! यो सिलसिलाको अभिप्राय, परिचित मित्रहरु केही प्राप्ति गर्न सकोस् केही कण सिक्न सकोस् भन्नेपनि हो ।
आजसम्म मैले दैनिकी डायरीमा लेख्दै आएको छु । जुन म भित्र गुम्सिएका छन् । अब मेरा दैनिकी र कार्यविवरण विश्वभरका मेरा झण्डै दशौ हजार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष मित्रहरुले खुल्ला किताब सरह पढ्न र बुझ्न पाउनेछन । यसैसँग एउटा के कुरा जोड्न चाहन्छु भने मेरा दैनिकीमा धेरै मित्रहरुका प्रश्न थिए । कहाँ हराउनुहुन्छ ? कता गायब ? केमा व्यस्त ? आदि । अब सत्यकुरालाई हरेक दिन दैनिक अपडेट शुभारम्भ गर्दैछु । जसलाई पढेर बुझेर मित्रहरुले मलाई प्रश्न नगरोस् ।
यो अभियानको सोच निकै अघि देखि थियो । हरपल हरेक यात्राको खुल्ला सत्य सबैले थाहा पाओस् भन्ने घेय पनि हो । लेखन दैनिकीमा सिमित मेरा अपडेटहरु अब आधुनिक हुनेछन् । कुनैपनि बेला केही भइहाल्यो भनेपनि म सबैसँग खुलेको हुनेछु । बश यत्तिमात्रै हो अभियानको मुल उद्देश्य ।
This entry was posted in दैनिकी, म र मेरो कुरा. Bookmark the permalink.